नेइमारको मूल्य ह्वात्तै घट्यो, झण्डै १०० मिलियन युरो कम भएको अनुमान, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेइमारको मूल्य ह्वात्तै घट्यो, झण्डै १०० मिलियन युरो कम भएको अनुमान
काठमाडौँ । लगातार विवाद र इन्जुरीको समस्याले ग्रसित ब्राजिलका फुटबलर नेइमारको मुल्यमा ८० मिलियन युरोले कमी आएको छ ।
खेलाडीको ब्राण्ड भ्यालुसम्बन्धि अध्ययन गर्ने संस्था सिआईइएस फुटबल अब्जरभाटोरीले जारी गरेको रिपोर्टमा नेइमारको मुल्य घटेको उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा नेइमारले मैदान र मैदान बाहिर गरेका गतिबिधिका कारण उनको मुल्यमा कमि आएको सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१७ मा २२२ मिलियन युरोमा बार्सिलोनाबाट फ्रेन्च क्लब पिएसजी गएका नेइमारले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न संघर्ष गर्दै आएका छन् । यस सिजनमा समेत उनी लिग वान र च्याम्पियन्स लिगमा समेत पुरा सिजन खेल्न सकेनन बहने पछिल्लो समय ब्राजिलको कोपा अमेरिका टिमबाट समेत बाहिरिएका छन् ।
यति मात्र होइन मैदान बाहिर उनको व्यबहारका कारण पनि उनी विवादमा पर्दै आएका छन् । लिग वान र च्याम्पियन्स लिगका खेलमा समेत प्रतिबन्धमा परेका नेइमार आफ्ना सहकर्मी किलीयन एम्बाप्पेसँगको विवाद समेत चर्चामा रहेको थियो ।
त्यस्तै पछिल्लो समय उनीमाथि ब्राजिलकी एक मोडललाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि त उनको लोकप्रियता झन खस्किएको बताइएको छ ।
यी सबै प्रकरणपछि अहिले नेइमारको मुल्य १२० मिलियन युरोको आसपास रहेको सिआईइएस फुटबलले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
ब्राजिलको कोपा खेल्ने टिमबाट बाहिरिएका नेइमार अहिले आफूमाथि लागेको बलात्कारको आरोपविरुद्ध कानुनी लडाईमा रहेका छन् ।
यसका साथै पछिल्लो समय नेइमारले पिएसजी यसै सिजनमा छोड्ने र बार्सिलोना जाने सम्भावन बढेको मिडिया रिपोर्ट समेत सार्वजनिक भएको छ । नेइमार बार्सिलोना जान सक्ने भएकै कारण एन्टोनी ग्रीजम्यानका विषयमा अहिले कुनै कुराकानी नभएको समेत मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
पिएसजीमा दुई सिजन खेलेका नेइमारले कुल ५८ खेल खेल्दै ५१ गोल गरेका छन् । जसमा पहिलो सिजनमा ३० खेल खेल्दै २८ गोल गरेका थिए भने यस सिजनमा २८ खेल खेल्दै २३ गोल गरेका छन् ।